Mieritreritra ve ireo mpikatroka ny zon'ny biby fa manana zo mitovy amin'ny olona ny biby?
Ny zon'ny biby dia ny finoana fa ny biby dia manan-jo tsy hanana fahalalahana sy fampiasana ny olombelona, ​​saingy be dia be ny fikorontanana momba ny dikan'izany. Ny zon'ny biby dia tsy mametraka biby ambonin'ny olombelona na manome biby mitovy zo amin'ny olombelona. Ny zon'ny biby dia tsy mitovy amin'ny fiarovana ny biby.
Ho an'ny ankamaroan'ny mpikatroka ny zon'ny biby, ny zon'ny biby dia voaloton'ny karazana karazana ary ny fahalalana fa ny biby dia manana fahatsapana (ny fahafahana mijaly).
(Mianara bebe kokoa momba ireo fitsipika fototra momba ny zon'ny biby .)
Fahalalahana amin'ny fampiasana ny olona sy ny fitrandrahana
Ny olombelona dia mampiasa sy manararaotra biby isan-karazany, anisan'izany ny hena, ny ronono , ny atody, ny fanandramana biby , ny felany, ny fihazana ary ny fihodinana .
Raha tsy misy ny fanandraman'ny biby, dia tsy mahafa-po ny fampiasana ireo biby ireo. Ny olona dia tsy mila hena, atody, ronono, hoditra, fihazana na cirque. Ny Fikambanana Amerikana Diabetika dia miaiky fa ny olona dia afaka salama tsara toy ny vegans.
Momba ny fanandramana biby, ny ankamaroany dia manaiky fa tsy ilaina ny fitsapana ny lobolobo sy ny vokatra ao an-trano. Ny fantsom-bokatra vaovao na ny lipstick dia toa ny antony mahasosotra ny jamba, maim, ary mamono olona an'arivony na an'arivony.
Maro koa no milaza fa ny fanandramana ara-tsiansa momba ny biby noho ny siansa, izay tsy misy fampiharana mivantana amin'ny fahasalamana ho an'ny olombelona, ​​dia tsy ilaina, satria ny fijalian'ny biby dia mihalafo ny fahafaham-pon'ny olombelona.
Manana fanandramana ara-pitsaboana fotsiny izy ireo. Na dia mety hitarika ny fandrosoana ara-pahasalaman'ny olombelona aza ny biby, dia tsy afaka manamarina ny fanararaotana biby ho an'ny fanandramana fotsiny fa tsy ny fanandramana amin'ny marary saina na ny zazakely dia azo hamarinina.
Fanamarinana ho an'ny fitrandrahana biby
Ny fanamarinana mahazatra indrindra amin'ny fampiasan'ny biby dia:
Ny biby dia tsy mahira-tsaina (tsy afaka mieritreritra / ny antony).
Tsy zava-dehibe toy ny olona ny biby.
Tsy manana adidy ny biby.
Andriamanitra dia nametraka biby ho antsika mba hampiasaintsika.
Ny zo dia tsy afaka ny hamaritra ny fahaiza-misaina, na tsy maintsy mametraka fisedrana ny faharanitan-tsaina mba hamaritana hoe iza no mendrika ny zo. Midika izany fa tsy manana zo ny zaza, ny kilemaina sy ny marary saina.
Ny maha-zava-dehibe dia tsy fepetra tsara ho an'ny zon'ny mihazona satria manan-danja be ny lanjany ary ny tsirairay dia manana ny tombotsoany manokana izay mahatonga ny tsirairay ho manan-danja ho azy manokana. Ny olona iray dia mety mahita fa ny biby fiompiny manokana dia manan-danja kokoa ho azy ireo noho ny olon-tsy fantatra any amin'ny faritra ilan'izao tontolo izao, saingy tsy manome azy ireo ny zo hamono sy hihinana izany olon-tsy fantatra izany.
Ny filohan'i Etazonia dia mety ho manan-danja kokoa noho ny ankamaroan'ny olona, ​​saingy tsy manome ny filoha ny zo hamono olona sy hikolokolo ny lohany eo amin'ny rindrina. Azonao atao ihany koa ny miady hevitra fa ny trozona manga iray dia manan-danja kokoa noho ny maha-olona iray tokana satria tandindomin-doza ny karazana ary ilaina ny tsirairay mba hanampiana ny mponina.
Ny andraikiny dia tsy fepetra tsara ho an'ny zo mihazona ihany koa satria ireo olona izay tsy afaka manaiky na manatanteraka andraikitra, toy ny zazakely na olona manana fahasembanana lalina, dia mbola manana zo tsy tokony hohanina na hanandramana.
Ankoatra izany, ny biby dia vonoina matetika noho ny tsy fanarahany ny fitsipiky ny olombelona (oh: ny totozy voavono eo am-pandriana), ka na dia tsy manana adidy aza izy ireo, dia manasazy azy ireo noho ny tsy fisian'ny fanantenana.
Ny finoana ara-pinoana ihany koa dia fanapahan-kevitra tsy mety mifanaraka amin'ny zo mitazona satria ny finoana ara-pinoana dia tena samirery sy ny tena manokana. Na dia ao anatin'ny fivavahana aza dia tsy hiombon-kevitra amin'ny olona ny didin'Andriamanitra. Tsy tokony hametraka ny finoantsika amin'ny hafa isika, ary ny fampiasana ny fivavahana hanamarinana ny fitrandrahana biby dia manery ny fivavahantsika amin'ny biby. Ary tadidio fa efa nampiasaina taloha ny Baiboly hanamarinana ny fanandevozana ny Afrikana sy ny Amerikanina Afrikana any Etazonia , mampiseho ny fomba ampiasain'ny olona matetika ny fivavahana ho fialan-tsiny mba hanohizana ny finoany manokana.
Satria misy foana ny olona sasany tsy mifanaraka amin'ireo fepetra ampiasaina hanamarinana ny fitrandrahana biby, ny hany tena mampiavaka ny olombelona sy ny biby tsy olombelona dia karazany, izay tsy mety ny manosika ny olona eo aminy ary tsy manana zo.
Tsy misy tsipika mahagaga eo amin'ny olombelona sy ny biby tsy olombelona.
Ny zo mitovy amin'ny Olombelona?
Misy ny fiheverana mahazatra fa ireo mpikatroka mafàna fo mpiaro ny zon'ny biby dia maniry ny hanana zo mitovy amin'ny olona. Tsy misy olona maniry ny hisafidy ny saka ny zo hifidy, na ny alika hahazo ny zo hitondra. Ny olana dia tsy hoe tsy maintsy manana zo mitovy amin'ny olona ihany ny biby, fa raha manana zo hampiasa sy hanararaotra azy ireo amin'ny tanjontsika kosa isika, dia mety ho tsy misy dikany.
Animal Rights v. Fifanampiana biby
Ny zon'ny biby dia manavaka amin'ny fiantohana ny biby . Amin'ny ankapobeny, ny teny hoe "zon'ny biby" dia ny finoana fa ny olona dia tsy manan-jo hampiasa biby ho an'ny tanjontsika manokana. Ny "fiantohana ny biby" dia ny finoana fa manana zo hampiasa biby ny olombelona raha mbola zakan'ny olombelona ny biby. Ny toerana misy ny zon'ny biby amin'ny fambolena fiompiana dia ny tsy ahafahantsika manana zo hamono biby ho an'ny sakafo na inona na inona tsara atao amin'ny biby mandritra ny androm-piainany, raha toa ka mety haniry ny hahita toerana hialana sasatra ny fombafomba fidiovana.
Ny "tombontsoan'ny biby" dia manoritsoritra fomba fijery malalaka, raha toa kosa ny zon'ny biby dia tsy misy dikany. Ohatra, ny sasany amin'ireo mpisolovava momba ny fiahiana ara-pananahana dia mety maniry ny fandrarana ny hoditra, fa ny hafa kosa mety mino fa ny felam-boninkazo dia azo ekena ara-moraly raha maty "biby" ny biby ary tsy mijaly ela loatra amin'ny fandrika. Azo ampiasaina koa ny "Animal welfare" amin'ny famaritana ny fomba fijerin'ny besinimaro fa ny biby sasany (ohatra ny alika, saka, soavaly) dia mendrika ny fiarovana noho ny hafa (ohatra trondro, akoho, omby).
Ny dingana Plea Bargain momba ny raharaha heloka bevava
Avon, Mary Kay sy Estee Lauder dia mijery ny fitsapana biby
Ny antotan-dàlana mialoha ny fitsarana momba ny raharaha heloka bevava
Fandinihana ny lalàna famonoana olona
Fahaizana mampihemotra sy mampihena
Nahoana ny Vegans Tsy Mitafy Seza?
Inona no atao hoe heloka bevava?
Inona no atao hoe habibiana?
Manana zo ve ny bibikely?
Ny andian-jiolahim-pitsarana momba ny heloka bevava
Kalvary Chapel History
Hira i Tito Puente
Fanoloran-tena an-tsitrapo ho an'ny fiantohana ara-bola
18 Sariaka mahagaga sy mahagaga ao amin'ny Zoo
Famaritana amin'ny atiny
Du'a: Fitalahorana manokana amin'ny finoana silamo
Asa fisoratana fototra azo tsapain-tanana 20
Toeram-ponenana mihaja ho an'ny acrylique
Fiara avo lenta - Harefo na Double-Decker?
Boky Lehibe ho an'ny Vehivavy
Ny fanatanjahan-tena tsara indrindra: Ny bakteria Brachialis
Hans Lippershey: Fanadihadiana Teleskaopy sy Microscope
Inona no tokony ho fantatrao momba ny fitsaboana sy ny fampiofanana
Inona no lazain'ny Standard Distribution?
Youngest Golfers hilalao amin'ny Tournament PGA Tour
'Je Vais': Aza manao fahadisoana amin'ny teny Frantsay
Inona no dikan'ny Diviziona NCAA I, II na III?
1998 Masters: O'Meara dia O'Major
Nahoana no tena malaza ny fitondram-panjakana?
Ny fomba hiresahana momba ny ampahany amin'ny vatana amin'ny teny italianina
Jane Seymour - fahatelo i Henri VIII
Ny fomba nandraisan'ny Romana ny Repoblika Romana
ActionListener any Java
Ny loza tranainy Grika fahiny: fametrahana ny dingana